Isazohlala ekhaya iMeya yeTheku – Sivubela intuthuko Newspaper
UNobhala we ANC Kwa Zulu-Natali u Mdumiseni Ntuli noSomlomo we ANC Kwa Zulu-Natali uDkt Ricardo Mthembu ngesikhathi kunesithangami sabezindaba eThekwini kulandela umhlangano we PEC.
Isigungu sekomithi lesifundazwe (Provincial Executive Committee) le African National Congress i imemezele ukuthi iMeya yase Thekwini uCllr. Zandile Gumede usazoqhubeka nokuhlala ekhaya njengoba esekhefini elikhethekile, ikomiti lithe uCllr. Fawzia Peer obambe izintambo kwese Meya uzoqhubeka kuze kuthathwe isinqumo ngekusasa lika Gumede.
I ANC PEC ithe inqume ukwelula ikhefu lika Gumede ukuze ikwazi ukuthatha isinqumo esingujuqu seyixhumene nazo zonke izinhlaka ezithintekayo. Ekhuluma esithangamini nabezindaba, uNobhala we ANC Kwa Zulu-Natali uMnuz. Mdumiseni Ntuli uthe i PEC imile emigomeni ka Khongolose futhi izimisele ukuxazulula le nzukazikeyi ukuze zonke izinto zizobuyela esimeni esejwayelekile.
“Isinqumo esizothathwa yi PEC sifisa ukuba singashiyi kukhona okushayisa amakhala. Sifisa ukunika zonke izinhlaka ezithintekayo ithuba lokuzwakalisa izimvo zazo. Sizomemezela maduze uma isinqumo sesithathiwe ngo Cllr Gumede. I PEC inqume ukwelula isikhathi sakhe sekhefu ukuze izothola isikhathi sokucubungula zonke izinto ezibalulekile ngesinqumo okumele sithathwe,” kusho u Ntuli.
UNtuli uthe kulindeleke ukuthi i PEC ithathe isinqumo ngo Gumede ngasekupheleni kwaleli sonto.
UGumede wethweswa amacala enkohlakalo yi Durban Specialised Commercial Crimes Court ngasekuqaleni kwalo nyaka. Kusolakala ukuthi wasebenzisa isikhundla sakhe ukwelelesa ithenda yezigidi zamarandi yokulahlwa kwemfucuza.